३४. भविष्य बदल्न सकिन्छ - Harish Bk
Home/ Article/३४. भविष्य बदल्न सकिन्छ
Harish BK December 29, 2017
Dr. Yogi Vikashnanda: एक्सन रिप्ले एउटा हिन्दी फिल्मको नाम । त्यस सिनेमामा जोइपोई असाध्यै एक–आपसमा झगडा गर्छन् । आमा–बाबाका अटुट झगडाबाट आजित भएको छोरा टाइम–मसिनमा चढी उनीहरूका भूतकालमा चियाउन सफल हुन्छ । अविवाहित कालदेखि नै उनका आमा–बाबाहरू एक–आपसमा पटक्कै मिल्दैन थिए ।
एउटा विशेष परिस्थिति आइपरेकोले मात्र उनीहरूको विवाह सम्पन्न भएको थियो । छोरो चाहंीँले कुरो बुझ्यो— आमा–बाबामा अहिले प्रेम नहुनुको कारण विगतमा मेल नहुनु पो रैछ । छोरो टाइम–मेसिनको माध्यमबाट भूतकालमा पुग्योे । र, उसले विशेष परिस्थिति निमार्ण गरी आमा–बाबाको भूतकालाई सच्याइ दियो । अर्थात् विवाह पूर्व नै आमाबाबाबीच पे्रमको विजारोपन गर्न ऊ सफल भयो । त्यसपछि ऊ टाइम–मेसिनमै चढी वर्तमानमा आयो र उसले झगडालु बाबु–आमाबीच अगाध प्रेम सुरु भएको पायो ।
यस कथावस्तुको सन्देश के हो भने यदि विगतमा कुनै पनि क्षेत्रमा खराबी भए मात्र वर्तमानमा खरावी हुन्छ । त्यस्तै विगतमा सबै कुरा ठीक–ठाक भए मात्र वर्तमानमा सवै कुरा ठीक–ठाक रहन्छन् । निश्चय पनि हामीलाई फिल्ममा जस्तो टाइम–मेसिन चढी विगत सच्याउन सम्भव हुँदैंन तर वर्तमानलाई सच्याउने मौका भने सवैस“ग रहन्छ । परिमाणस्वरूप भविष्य सुखद, सफल एवं सार्थक बनाउन भने अवश्य सकिन्छ । यिनै कुरालाई मध्यनजर राखी महर्षी पतञ्जलीले योगसूत्रमा भनेका हुन्— हेयम् दुःखम् अनागतम् अर्थात् भविष्यमा आइपर्ने दुःखलाई भने हामी सबैले मेटाउन सक्छौ“ । यद्यपि हामीले वर्तमानमा प्रसस्तै दुःख–पीडा झेलीरहेका हुन सक्छौ“ तैपनि भविष्य भने हाम्रै हातमा रहन्छ । त्यसको लागी विगतका गल्तीबाट सिकेर वर्तमानलाई सच्याउने आ“ट भने गर्नै पर्छ । यहा“नेर विश्वविख्यात् अमेरिकी हास्य कलाकार मार्क टोएनको भनाइ पनि ठिकै देखिन्छ । उनी भन्छन् —हामी सबैले भविष्यबारे सोच्नु पर्छ किनभने हामी सबै त्यतैतिर जा“दैछौं ।
संगीतको इतिहासमा सर्वाधिक श्रद्धास्पद नाम हो लुडविग वान विथोविन । यस कारणले मात्र हैन कि उनले महानतम संगीत निमार्ण गरे । उनी यस कारण महान हुन् कि उनले सबभन्दा राम्रो कम्पोज आफू बहिरो भैसकेपछि गरेका थिए । कल्पना गर्नोस् त– यसरी असंभव प्राँयः कार्य–सिद्धिको कारण भने उनको विगत नै थियो । उनी मात्र चार वर्षको छदाँ सबै सुती सकेको बेलापारी भ्वाइलिनको अभ्यासमा निमग्न रहन्थे । चार वर्षको बच्चा आधिरातसम्म, त्यो पनि निरन्तर अभ्यास । हो, यही उनको अर्थपूर्ण विगतकै परिमाणस्वरूप, कानले साथ नदिंदा पनि उनी सफलतम संगीतकर्मी हुन सफल भए ।